Qeexida iftiinka darbiga qoraxda ee Shiinaha ee soosaarayaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha 1000 Lumens | Hangchi
Awoodda guddi qoraxda
Waqtiga lacag bixinta
Heerkulka lacag -bixinta
Beddel dareeraha iftiinka
≥80 Lux, off
Lux20 Lux, on
M1: 0+PIR 1000LM (10 sekan） M2: 20LM+PIR 1000LM (10 sekan)
1. Qaabka iftiinka: M1: 0+PIR 1000LM (10 sekan）
M2: 20LM+PIR 1000LM (10 sekan)
2. Riix badhanka gaduudan 1.5S si aad u damiso oo u darto ka dib markaad shiddana si otomaatig ah ayuu u bakhtiyaa oo u bakhtiinayaa, hoos ka eeg sawirka ； Gaaban riix badhanka cas si aad u beddesho hababka
3. fududahay in la rakibo
ALS (nidaamka nalalka la -qabsiga): Marka la kulmo cimilada xun oo aan lahayn qorrax ku filan, nidaamku wuxuu samayn doonaa xisaabinta waqtiga habboon ee awoodda batteriga soo hadhay wuxuuna siin doonaa adeegsi wax -soo -saarka ugu badan waqtiga iftiinka dheer
TCS (Nidaamka xakamaynta heerkulka) marka heerkulku ka sarreeyo 60 ℃, TCS waxay jari doontaa nidaamka lacag -bixinta si loo ilaaliyo batteriga, marka ka hooseysa 60 ℃, nidaamka lacag -bixinta ayaa si otomaatig ah u shaqeyn doona
QIIMEYNTA SOO SAARKA
BAAQA SOO SAARKA
Naqshad casri ah oo heer sare ah ayaa loo heli karaa qayb kasta. Jid yar oo leh jir weyn, aad u fiican in lagu iibiyo Amazon.
nalalka qoraxda Qodobbada ugu muhiimsan:
1. Waxay ka samaysan tahay jirka aluminium, wadar ahaan way ka duwan tahay iftiinka jaban ee suuqa. Intooda badan waxay ka samaysan yihiin ABS caag ah oo leh jir adag
2. Si sahlan loo rakibo oo loo diro - jir yar oo leh awood weyn (1000 lumen) oo ku jira waxqabad weyn.
3. Tiknoolajiyadeena gaarka ah si aan u hubinno in iftiinku si fiican u shaqeeyo maalmaha roobka/daruuraha (5 maalmood ka badan).
Waxaa lagu rakibi karaa labada dhinac ee waddooyinka yaryar sida jardiinooyinka iyo bulshooyinka si ay u siiso nalal dadka lugaynaya;
Qaybaha taraafikada iyo dekadaha waxaa loo isticmaalaa nalalka tilmaamayaasha si loo hubiyo nabadgelyada iyo kala dambaynta taraafikada iyo maraakiibta;
U isticmaal sida iftiiminta qurxinta meelaha badhtamaha badhtamaha ama meelaha dalxiiska si aad u abuurto jawi gaar ah;
Waxaa loo adeegsan karaa geedaha geedaha, beeraha, cawska iyo meelaha kale si loo gaaro iftiin iyo saamayn cayayaan.
Muuqaalku waa mid fudud oo qurux badan, oo leh hawsha kontoroolka iftiinka ee waqtiga la koontaroolo, xakamaynta caqliga leh ee xoogga iftiinka;
Isticmaalka xadhkaha beddelidda sare ee korontada cadceedda iyo baytariyada dib -u -soo -ceshada, qorraxda tooska ah ee xooggan oo xoog leh ayaa ku dallaci karta muddo dheer;
Marka shidmahu dhalaalayo, dhalaalka iftiinku wuu sarreeyaa;
Ku -dallacidda qorraxda, keydinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka;
Looma baahna fiilooyin, meel walba ku rakib, korontada danabku hooseeyo waa ammaan;
Nidaamka soo -gelinta caqliga leh, si otomaatig ah u dami nalalka inta maalintii ah oo lacag qaado, oo si toos ah u shid nalalka mugdiga;
Bixinta nalalka iftiinka sare leh oo beddel hababka iftiinka hooseeya iyadoo loo eegayo masaafada dadka lugaynaya, iyadoo la tixgelinayo baahiyaha nalalka iyo qurxinta;
Iyada oo leh habab shaqo oo badan oo loogu talagalay dejinta, furayaasha shaqadu waxay kala soocaan shaqooyin kala duwan, fudud oo cad;
Teknolojiyadda madaxa dareemayaasha laba-geesoodka ahi waxay xaqiijineysaa inaysan jirin xagal dhimatay oo ku jirta dareenka 180-darajo waxayna wanaajineysaa saameynta adeegsiga dhabta ah;
Si hal -abuur leh u kordhi saamaynta nalalka midabka leh, oo dhalaalaya oo midab leh, korna u qaadaya khibradda isticmaalaha;
Bixi qalabka dhejinta fur, kaas oo lagu hagaajin karo darbiyada dibadda, dayrarka, tiirarka iyo meelaha kale;
Ku rakib meel qorrax leh si aad u hubiso iftiin dabiici ah oo wanaagsan;
Hore: Qeexitaanka 10000 Lumens
Xiga: Qeexitaanka 2000 Lumens
Nalalka Nalalka Qorraxda ee Led
Nalalka Darbiga Solar
Nalka Darbiga Cadceeda
Iftiinka Darbiga Qorraxda oo leh Dareenka Dhaqdhaqaaqa
Bateriga jel ee wareegga qoto dheer ee kaydinta qoraxda
JFY ECM/ECH (laba jibbaaran) 15KW-Wax-ku-oolnimada Sare Intell ...
Qeexitaanka 10000 Lumens